I-AmazonSmile kunye noLuhlu lokunqwenela
IAmazonSmile yindlela elula, ezenzekelayo yokuxhasa iMyuziyam yaBantwana yaseWilmington ngalo lonke ixesha uthenga! I-AmazonSmile Foundation iya kunikela nge-0.5% yexabiso lokuthenga - ngaphandle kweendleko kuwe! Khangela iMyuziyam yaBantwana yaseWilmington ukuze usibeke kwindawo yakho yesisa yeAmazonSmile!
Ngaba ujonge enye indlela yokunceda? Cofa apha ukujonga uluhlu lwethu lwe-Amazon Wish.
Ngaba ujonge indlela yokuxhasa iindawo ezithile zeMyuziyam? ILakeshore Learning yivenkile yemfundo enceda ootitshala ukusukela ngeminyaka yoo-1950. Izinto zethu Uluhlu lweminqweno yokuFunda yaseLakeshore iya kunceda abantwana kwiMyuziyam kuyo yonke kunye nakwiNkqubo yethu yeMfundo.